Global Aawaj | रिसोर्टमा बसेका ४१ सांसद प्रदेश सभामा, आजै नयाँ सरकार बन्ने ! रिसोर्टमा बसेका ४१ सांसद प्रदेश सभामा, आजै नयाँ सरकार बन्ने !
रिसोर्टमा बसेका ४१ सांसद प्रदेश सभामा, आजै नयाँ सरकार बन्ने !
२७ श्रावण २०७८ 12:39 pm
बुटवल । आफ्ना सांसद खरिद–बिक्री हुने वा अपहरण हुने आशंकामा २ दिनदेखि कपिलबस्तु र रुपन्देहीका रिसोर्टमा राखेको लुम्बिनीको विपक्षी गठबन्धनले आज उनीहरुलाई प्रदेश सभामा उपस्थित गराउँदै छ । ४१ सांसदसहित आफ्नो बहुमत देखाएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रतिपक्ष गठबन्धनले आजको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनबाट मुख्यमन्त्री पोखरेललाई वर्खास्त गर्नेमा विश्वस्त छ ।
यससँगै आजै गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी संसदीय दलका तथा पूर्व कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने दावी गरेको छ । प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनसँग सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत रहेकाले गठबन्धनका तर्फबाट आज नै कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी रहेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेको ४१ सांसद नै प्रदेशसभामा आइसेको र आज नै लुम्बिनी प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने नेपाली कांग्रेसका सांसद फकुरुद्धिन खानले बताए । ‘आज यो प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउँछ ।’ ग्लोबल आवाजसँग कुराकानी गर्दै सांसद खानले भने‘ सबै विपक्षी गठबन्धनका सांसद प्रदेशसभामा आइसकनु भएको छ । ’
विपक्षी गठबन्धनले आफ्ना सांसदलाई सत्तापक्षले विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने डरले २ दिन अघिदेखि नै रिर्सोटमा राखेका थिए । विपक्षी गठबन्धनका ३४ सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशनका लागि समाबेदन दिएका थिए । सोही अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरेचनले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आज दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको बैठकमा विपक्षीले दर्ता गरको अविश्वासको प्रस्ताव टेवल हुने सम्भावना रहेको छ । यता नेकपा एमाले भने प्रदेश प्रमुखले बोलाएको अधिवेशन असैंबधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दयार गरेका छन् । अदालतले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिदिएको थियोे भने बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा रिटको पेशी तोकिएको छ । बुधबार सो रिट आठौं नम्बरमा राखिएको छ ।
यस्तै नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने वा राजीनामा दिने निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई दिएको छ । बुधबार विहान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारी निवासमा बसेको बैठकले निर्णय गर्ने सबै अधिकार मुख्यमन्त्री पोखरलाई दिने निर्णय गरेको एमाले सांसद बैजनाध चौधरीले बताए ।